Hantidhowrka ayaa loo dhameystiray dhammaan balastarrada ay soo gudbisay Jaamacadda Minnesota | Laga soo bilaabo Linux
Golaha farsamada ee Linux Foundation ayaa dhowaan soo saartay warbixin isku dhafan oo ku saabsan dhacdada la xiriira cilmi baarayaasha oo ka socda Jaamacadda Minnesota taas oo noqotay fadeexad, maaddaama ay isku dayeen inay soo bandhigaan jajabyada loo yaqaan 'kernel patch' oo ay ku jiraan cayayaanka qarsoon ee u nuglaanta u horseedaya.
Soosaarayaasha kernel ayaa xaqiijiyay macluumaadka la daabacay markii hore, 5 balastar oo loo diyaariyey inta lagu gudajiray baaritaanka «Munaafaqiinta Commits», 4 balastar ah oo nugul ayaa isla markiiba lagu tuuray hindisaha dayactirayaasha mana galin bakhaarka kernel.
Sidoo kale, 435 xaqiijin ayaa la falanqeeyay, oo ay ku jiraan hagaajinta ay soo gudbiyeen horumariyeyaasha Jaamacadda Minnesota oo aan la xiriirin tijaabo si kor loogu qaado dayacanka qarsoon.
On April 20, 2021, siiyey aragti ah in koox ka mid ah Baarayaasha Jaamacadda Minnesota (UMN) waxay dib u bilaabeen rarkii nambarka wax u dhimaya Linux-ka.
Greg Kroah-Hartman ayaa ka codsaday bulshada inay joojiso aqbalida sharootada UMN oo ay bilaabeen a dib-u-eegis cusub oo ku saabsan dhammaan soo-gudbintii Jaamacadda ee hore loo aqbalay
Warbixintani waxay soo koobaysaa dhacdooyinkii horseeday marxaladdan, dib u eegista iyodukumintiga "Munaafiqiinta Munaafiqiinta ah" ee loo gudbiyey in la daabaco, iyo wuxuu dib u eegis ku sameeyaa dhammaan walxaha hore loo yaqaan ee ka imanaya qorayaasha maqaalka UMN in waxaa laga aqbalay keydkeena. Gabagabadii qaar talooyinka ku saabsan sida bulshada, oo ay ku jiraan UMN, ay u dhaqaaqi karaan
horay u soco Ka qayb qaatayaasha dukumintigan waxaa ka mid ah xubnaha Linux
Guddiga La-talinta Farsamada (TAB) ee aasaaska, oo gacan ka helaya dib-u-eegista balastarka
xubno kale oo badan oo ka tirsan bulshada Linux soosaara kernel.
Tanina waa tan iyo 2018, koox cilmi baarayaal ah oo ka socda Jaamacadda Minnesota ayaa aad ugu firfircoonaa sixitaanka khaladaadka. Dib-u-eegista cusubi ma muujin wax dhaqdhaqaaq xun ah oo ku saabsan fal-dambiyeedyadan, laakiin waxay muujisay xoogaa khaladaad iyo ku-talo-gal ah oo aan ula kac ahayn.
Sidoo kale 349 xaqiijin ayaa lagu soo warramey inay sax yihiin oo aan la beddelin. 39 fal-dambiyeedyo, dhibaatooyin u baahan dayactir ayaa laga helay; hawlgalladaan waa la joojiyay waxaana lagu beddeli doonaa hagaajinno sax ah ka hor inta aan la sii deyn kernel 5.13.
Khaladaadka ku jira 25 ballanqaad ayaa lagu hagaajiyay isbeddelada xigay iyo 12 ballanqaadyo ayaa lumiyay xiriirkooda, tan iyo markii ay saameeyeen nidaamyada dhaxalka ee horay looga saaray firida. Mid ka mid ah xaqiijinta saxda ah ayaa la joojiyay codsi qoraaga. 9 xaqiijin sax ah ayaa laga soo diray @ cinwaanada umn.edu waqti dheer kahor sameynta kooxda cilmi baarista ee la falanqeeyay.
Si dib loogu soo celiyo kalsoonida kooxda Jaamacadda Minnesota isla markaana loo soo celiyo fursadda ah in laga qaybqaato horumarinta kernel, Linux Foundation waxay soo bandhigtay shuruudo dhowr ah, kuwaas oo badankood hore loo buuxiyey.
Hawlkarnimada awgeed waxay u baahan tahay xisaab hubin si loo ogaado qorayaasha ka qayb qaatay mashaariicda cilmi baarista ee kala duwan ee UMN, cadee ujeedka mid uun balastar iyo ka saar balastar khaldan iyadoo aan loo eegin ujeedka. Iyadoo tan, dib u soo celinta lKalsoonida bulshada ee kooxaha cilmi baarista sidoo kale waa muhiim, maadaama ay tahayDhacdadan waxay saameyn ballaaran ku yeelan kartaa kalsoonida labadaba cinwaanada qaboojin kara ka-qaybgalka cilmi-baare kasta iyo kan horumarinaya.
Tusaale ahaan, cilmi-baarayaashu horay ayey uga laabteen daabicitaankii "Hypocrite Commits" waxayna joojiyeen wadahadalkii ay ka lahaayeen IEEE Symposium, marka lagu daro inay si guud u soo bandhigaan taariikhda buuxda ee dhacdooyinka iyo inay bixiyaan faahfaahinta isbeddelada la soo gudbiyay inta lagu guda jiray daraasadda.
Waa inaad xusuustaa taas - Greg Kroah-Hartman, yaa mas'uul ka ah dayactirka laanta xasilloon ee Linux kernel ayaa ogaatay dhacdada oo qaadatay go'aanka diidmada wixii isbeddelo ah ee ka socda Jaamacadda Minnesota ee loo yaqaan 'Linux kernel', oo dib loogu celiyo dhammaan balastarradii horay loo aqbalay oo dib loo hubiyo.
Sababta loo xanibay waxay ahayd waxqabadyada koox cilmi baaris ah kaas oo daraaseeya suurtagalnimada dhiirrigelinta nuglaanta qarsoon ee koodhka mashaariicda ilaha furan, maaddaama kooxdani ay soo direen dhejisyo ay ku jiraan khaladaad noocyo kala duwan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Hantidhowrka ayaa loo dhameystiray dhammaan balastarrada ay soo gudbisay Jaamacadda Minnesota